? Izihloko ezi-9 eziSimahla zeWordPress [TOP 2021] | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Eyona mxholo yasimahla yeWordPress
UManuel Ramirez | | imixholo, Wordpress
I-WordPress ikhule ngendlela yokuba sikwazi ukufikelela kwimixholo ekumgangatho ophezulu yasimahla ezisigcinela umsebenzi omninzi kwizinto ezahlukeneyo ezenza iwebhusayithi. Kungenxa yoko le nto siza kwabelana nani nonke ngemixholo yasimahla.
Singaqala nge I-OceanWp, i-Astra okanye i-GeneratePress ngokwayo Yeyiphi imixholo ekhawulezayo yokulayisha. Le nyani kufuneka ithathelwe ingqalelo, kuba kukho imixholo "enzima" eza nezinto ezininzi, kodwa xa kulayishwa iwebhu, sinokufikelela kwimizuzwana emi-2 okanye emi-3; into ebulalayo kwi-SEO yendawo yethu. Ziphose kuyo.
2 Umxholo we-Astra
5 Molo Mxholo
Singaphambili omnye wemixholo elula kakhulu esinayo ngoku kwindawo yokugcina izinto yeWordPress. Oko kukuthi, sithetha ngomxholo wokunxiba iwebhusayithi yethu enesizathu sokukhanya kwaye ukusetyenziswa kufanelekile namhlanje. Ewe umxholo uthi "unxiba" indawo yethu kwaye kule meko kufuneka sithathele ingqalelo ukuba iyaphendula kwaye ilungiselelwe "ukuhamba".
I-GeneratePress inakho Ziqhayise ngokulwa iintloko ngentloko ngokuchasene neminye imiba yezinto njenge-Astra okanye i-OceanWp uqobo. Phakathi kwezinye zezona zinto zibalaseleyo, ngaphandle kwezi zimbini zikhankanyiweyo, sinokufumana ukhuseleko kunye nozinzo, olulungiselelwe iinjini zokukhangela kwaye zilungele ukufikeleleka; Eli nqaku lokugqibela libaluleke ngakumbi ukuze bonke abasebenzisi bakwazi ukufikelela kwiwebhusayithi yethu.
Inika imodeli yeprimiyamu enezinto ezininzi, Kodwa ukuzama, kwaye simahla, kunokuba kufanelekile ukuba sinxibe iwebhusayithi yethu kwaye siyishiye ikhangeleka intle. Enye yezinto ezibalulekileyo kwiWindowsPress.
GeneratePress - Ukukhuphela
Ukuba kukho isihloko esithi Ngaphandle kokukhanya kubunzima, ipakishwe ziimpawu, Lo ngumxholo we-Astra. Ngaphandle kwento yokuba ukuba sifuna umxholo ofanelekileyo kwivenkile ekwi-intanethi, enje ngeWoocommerce, i-Astra yenye yezona zinto zibalaseleyo kulo mbandela. Inezinto ezibonakalayo kunye namawijethi abalulekileyo e-ecommerce, ke kuya kufuneka ibe yenye yezo kusoloko kufuneka sizixabise ngomsebenzi omtsha womthengi okanye wewebhusayithi yethu.
Njengokuba sikwixesha apho abakhi abanjengoElementor okanye iDivi ngokuya befumana amandla kuyilo lwe-wb, Astra Inomsebenzi wokufihla isihloko sephepha kunye nebar esecaleni. Abo kuni bajongane nezinye izihloko ngokuqinisekileyo baya kuyazi indlela yokuvavanya olu hlobo lokukhetha ngokwezifiso kakuhle.
Ngaphandle kokuba ngumxholo wokulayisha okhawulezayoNgaphandle kwe-OceanWP, ikulungele ukubonelela ngazo zonke iinketho eziyimfuneko kwiwebhusayithi kwaye eziya kuthi zivumele ukuba singene kwikhowudi yokuzinikezela kubasebenzisi bethu bewebhusayithi. Okokugqibela sinokuqaqambisa inani layo elikhulu kwiiwebhusayithi esele zenziwe ukuze ngonqakrazo olunye sibe noluhlu olutsha oluya kwimveliso.
Astra - Ukukhuphela
Eyona nto uyithandayo kuninzi lokubonelela ngesixa esikhulu zezinto simahla. Enye into ebalulekileyo kwiivenkile ezikwi-Intanethi nakwiminyaka embalwa ibe yenye yezona mxholo zibalaseleyo zeWordPress. Ihamba ngokugqibeleleyo kunye nabakhi besiza abachaziweyo njenge-Elementor kunye neefowuni ze-ecommerce ezinje ngeWoocommerce.
Ukusuka ukhetho lwayo olukhululekileyo kunye neWoocommerce esinokuba nayo esandleni sethu izinto ezibalulekileyo zokumiliselwa kwivenkile ekwi-intanethi kwaye uqalise ukuthengisa ngaphandle kwexesha. Ilungele i-ecommerce, iphendula kuzo zombini i-desktop kunye nokuhamba, ukulayishwa ngokukhawuleza kwewebhusayithi, eyilelwe nge-SEO engqondweni kunye nenkxaso yeelwimi ezahlukeneyo ukuze loo webhusayithi ilungele.
Njengo-Astra, ngumxholo weenjongo ezininzi, ke iyasebenza kwiphepha lokufika, njengesiseko se-Elementor, njengevenkile ye-intanethi okanye ibhlog elula. Enye yezona zihloko zibalaseleyo esinazo ngoku kwaye sicebisa ukuba ujonge umgangatho osemagqabini. Ikwanothotho lweepakethe zepremiyamu zokusa kwenye indawo ezinye zezona zikhetho zibalaseleyo njengesihloko esifihliweyo kumsongo okanye nokungena kwiinethiwekhi zentlalo ezinokubhalisa abasebenzisi bethu abatsha kwiwebhusayithi yethu ngokukhawuleza kwi-Facebook yabo iziqinisekiso okanye uGoogle.
I-OceanWP - Ukukhuphela
I-Elementor ingumakhi wesiza okhule ngokubanzi Kwiminyaka yakutshanje ngenxa yokuba iqhuba kakuhle kangakanani kwaye ngenxa yokuba inika amava amahle asimahla. Oko kukuthi, ukwenza iwebhusayithi kunye neefom, asizukufuna okanye sisebenzise i-euro.
Ewe Ewe Sifuna ukuphakamisa amava siye kwelinye inqanaba, kunye nohlobo lwePro Ukusuka kwi-Elementor siza kuba nazo zonke ezo zixhobo ukwenza zonke iintlobo zewebhusayithi. Iifom ezinemiqathango okanye nokuba nakho ukusebenzisa iimenyu zempendulo esecaleni ukuze iwebhusayithi yakho ijikelezwe ngokugqibeleleyo.
Ukuba sithetha ngomakhi, oko kuthetha ukuba unokulibala ngenkqubo, ke yonke into ishiywe ukuba irhuqe izinto esizifunayo njengombhalo, amacandelo, izihloko, izinto ezivelayo okanye iimenyu kwaye emva koko uyile umbulelo kunxibelelwano lwayo olunomdla. I-Elementor ihlaziywa rhoqo kwiinyanga ezimbalwa kwaye Inoveli yokugqibela ngo-3.0 yayikukufaka ubuqu bewebhusayithi ngamaxabiso ngokubanzi. Oko kukuthi, singasitshintsha isitayile sokubhaliweyo kuyo yonke iwebhu okanye sitshintshe inkqubo yombala ukuze senze utshintsho kwangexesha.
Vavanya kunye nomgangatho weetemplate zamaphepha onawo avela kwilayibrari nokuba sinazo simahla; Ukuba sele siye kwiPro sinokufikelela kwiindidi zazo kuzo zonke iintlobo zezizathu, nokuba likhasi lokufika, i-ecommerce okanye ibhlog uqobo.
Un umakhi ohambelana kakhulu nemixholo eyaziwayo efana ne-Astra okanye i-OceanWp Kwaye kuyasebenza ukubandakanya iphepha lokufika kule mixholo ukuze wenze iphepha njengoko silifuna. Isinika inkululeko enkulu kwimodeli yasimahla, kodwa izinto zepro ziguquka kakhulu. Ibalulekile namhlanje.
Mlawuli - Ukukhuphela
Este Umxholo wenziwe ngu-Elementor ukuze yenze owona mthwalo mncinci kwiserver kwaye sinokunciphisa ixesha elithathayo ukulayisha iwebhusayithi yethu. Oko kukuthi, ngaphandle kwemixholo yeWordPress ekuxoxwe ngayo ngasentla, uMxholo woMxholo ngumxholo ozinikele ngokukodwa kulo makhi.
Kwaye isizathu sayo sokudalwa kukuba ube lishiti elingenanto "ukunyusa" i-Elementor ukuze wenze indawo ngaphandle kwesidingo sokwenza ikhowudi ye-HTML. Nangona ayinakuthelekiswa neminye imixholo efana ne-Astra okanye i-OceanWp, ngumxholo ogqibeleleyo xa sigqibe ekubeni onke amaphepha ewebhusayithi esisebenza kuyo aza kwakhiwa kunye ne-Elementor. Oko kukuthi, elo phepha lingenanto kwimisebenzi ethile iya kuba nguMxholo oMnandi ngokugqibeleleyo.
Ngoko ke, ukuba uza kusebenzisa i-Elementor ukwakha iwebhusayithi Ngaphandle kwezidingo zakho zamaphepha e-WordPress kunye nezithuba, le mxholo ikuvumela ukuba wenze iwebhusayithi ukusuka ekuqaleni; Nangona ngokusengqiqweni kuyakuthatha umsebenzi omninzi, kodwa ngokudibanisa ungayenza iwebhu ngokwakho emsebenzini owenzileyo kwiFigma okanye kwiAdobe XD.
Molo Mxholo - Ukukhuphela
Okunye Umxholo omkhulu weenjongo ezininzi kwaye, nangona ingenako ukukhanya kwezinye zezo zikhankanyiweyo ukuza kuthi ga ngoku kumthwalo, ixabiso lazo elikhulu libangelwa kukuguquguquka okukhulu kwaye kuba ngumxholo ophendulayo wazo zonke iintlobo zewebhusayithi.
Chaza ukuba iza nesifundo esisincedayo kumanyathelo okuqala okwakha iwebhusayithi kwaye uyiyeke phantse ilungele ukwenziwa kwimveliso emva kokuba nayo ekuqhubeni nasekuvavanyeni. Inayo neeplagi ezongeza ukhetho olufunwa kakhulu njengeenkonzo okanye ubungqina; Sele uyazi ukuba kwakumnandi kangakanani ukufumana le nkonzo kwaye siyacebisa kwaye bahlala bevelisa uninzi lwezikhokelo kwezi ndawo.
Ikwahamba kakuhle kakhulu nabakhi besiza abanjengoDivi (iqabane elihlawulelweyo elingumlingani kwaye sikwacebisa nangona lilayishwe ngakumbi) kunye ne-Elementor. Ngaphandle koko ikwabonelela ngesakhono sokongeza amacandelo ngokutsala kunye nokwehla; nathi asikulibali oko inikeza ukuhambelana okuninzi neWoocommmerce, iplagi yefashoni yokuseka ivenkile ekwi-Intanethi kwaye enayo yonke into oyifunayo kwinqwelo, ivelisa iiodolo, ii-invoyisi, ukuhambisa ngeposi nokunye okuninzi.
Hestia - Ukukhuphela
Ukuba sikhangela umxholo wasimahla weWordPress kwaye sithini kugxilwe kula maphepha eenkampani Sicebisa lo mxholo ubizwa ngokuba yi-Bento. Inentando eyoneleyo yokuba yenye yezona zidumileyo, nangona ikude kuneyokuqala ekhankanyiweyo njenge-Astra okanye i-OceanWP.
Siyahamba ikwangumxholo weenjongo ezininzi, ke unokuyisebenzisa kwezi zizathu zevenkile ye-Intanethi okanye iphepha elinomdla lokumisa elisebenza njengetonela lakho lokuthengisa okanye itonela yetonela kwaye ngenxa yoko wondliwe kukukhokelwa emva kwephulo elilungileyo kwiintengiso ze-Facebook, okanye kutheni kungenjalo ziNtengiso zikaGoogle.
Kuba ngu Umxholo wasimahla uza upakishwe kukhetho lokwenza ngokwezifiso, ke ukuba nexesha elimnandi sinokushiya iwebhusayithi emiselweyo; ukuba emva koko sitsala ezinye zeekhowudi ze-CSS kunye ne-HTML ebesizidlulisa zisuka kwimigca yethu (enetalente encinci yokuba uyazi indlela yokuyiphatha nge-CSS), ingcono kunokuba ngcono. Nantsi unayo Iimenyu zeCSS, ibha esecaleni ibuyele kwiCSSt iisetyhula iimenyu kunye ne-CSS (ulwimi oluqhubayo).
Bento - Ukukhuphela
Ngokuya siye kwisihloko esikhuthaza Ubuncinci kwaye enye ijolise ekwenzeni ibhlog. Oko kukuthi, ukuba ujonge ukwenza iwebhusayithi ukuba ube nebhlog apho uza kupapasha amanqaku ngamaxesha, kufanelekile.
Singakubonisa oko kumyalezo owamkelekileyo sakufika kwiwebhusayithi kunye nezo CTA okanye ubizele isenzo (ibaluleke njengamaqhosha akhokelela) kwintloko yendawo.
Kufanele si Ikwabalaselisa nendlela egxininisa ngayo ngokuchwetheza kwaye oko kuzisa olo chukumiso lubalulekileyo lokuba semthethweni kwibhlog. Asiyikhathaleli inyani yokuba iphatha imifanekiso epapashiweyo okanye iposti kakuhle, ke yazi le nkcukacha xa uthatha isigqibo ngomxholo wokugqibela wasimahla weWordPress.
Go - Ukukhuphela
Ngokuqinisekileyo uya kuyazi ukuba iWindowsPress ihlaziyiwe ngenguqu enkulu enokuthi siyile iwebhusayithi kwiibhloko. Kukule ngqondo ke ukuba iBlocksy iphakama ibe ngumxholo wasimahla, ilula kwaye inqaku lipakishwe kwaye ichazwe ngendlela enjalo kwiibhloko yeWordPress.
Iminikelo a iintlobo ngeentlobo zeetemplate zazo zonke iintlobo zamaphepha, Kwaye inokusetyenziselwa ukwenza uluhlu olucekeceke lwewebhusayithi, kubandakanya ezo zinto zorhwebo, iibhlog, iipotifoliyo kunye nokunye. Iyahambelana nendawo eyaziwayo yomakhi wesiza kwaye isebenza kakuhle neWoocommerce.
Njengengcaciso yenkcazo inikezela ngenkqubo yokutshaja "eyonqenayo", kwaye oko kuthetha ukuba imifanekiso iyalayisha njengoko sikroba iwebhu; Oku kuthetha ukuba xa umsebenzisi "engahambi ezantsi" ukuya esiphelweni sewebhu, abayi kulayisha zonke izinto, oko kuthetha ukugcinwa okulungileyo ngexesha lokulayisha isiza okanye iphepha lokufika. Ilungele iRetina kwaye iphendula njengeselfowuni yenye yemixholo esiyicebisayo.
Ibhloko - Ukukhuphela
Ke sijolise kwi Alukho uluhlu olubanzi lweemixholo, kodwa zonke ezikumgangatho ophezulu kwaye simahla kwi-WordPress. Ngoku kuhlala kuwe ukuba uzame enye kwaye ufumane enye ekufaneleyo kwiimfuno zakho okanye zeklayenti ezikudingayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Wordpress » Eyona mxholo yasimahla yeWordPress
Iibhanki zemifanekiso ye-Creative Commons ezili-12